Firenenea aorian'ny krizy :: Nangataka fanafoanana ny fandoavanketra ireo vondrona mpandraharaha • AoRaha
Firenenea aorian’ny krizy Nangataka fanafoanana ny fandoavanketra ireo vondrona mpandraharaha
Tontosa teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, omaly, ny fihaonana andiany voalohany teo amin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry sy ireo vondrona mpandraharaha tsy miankina sy ny solontenan’ireo tompona orinasa eto Madagasikara. Mangataka ny hanafoanana ny fandoavanketra mba hahafahana miarina aorian’izao krizy ara-pahasalamana izao ireo mpandraharaha. Tsy vahaolana mahomby ny fanemorana ny fandoavan-ketra ho azy ireo noho ny tsy fisian’ny fidiram-bola intsony.
Nandroso hevitra, toy ny fanomezana fandaharam-potoana amin’ny fandoavan-ketra ihany anefa ireto mpidinika niaraka tamin’ny Filoha teny Iavoloha ireto, raha tena tsy hahafahana manoatra manoloana an’io fanafoanana io ny teti-bolam-panjakana, araka ny tenin-dRazafiarison Andrianavalomanana, filohan’ny vondron’ireo mpandraharaha eto Madagasikara (FIVPAMA), nisolo tena an’ireo mpitantana orinasa tsy miankina.
Iaraha-mahita ny fikatsoan’ny fifanakalozana amin’ ny tsena anatiny sy any ivelany, ankehitriny, noho ny valanaretina. Nohararaotin’ireo mpandraharaha kosa ny fikarohan’ny fitondrampanjakana amin’ny fanamorana ny fampindramam-bola amin’ny fanjakana sy amin’ ireo banky eto amintsika, miaraka amin’ny fepetra fampidinana ny tataon-ketra.
Fanomezan-toky azy ireo no isan’ny naverimberin’ ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry fa « ho eo akaikin’ireo orinasa misedra fahasahiranana tanteraka amin’izao ady amin’ny Covid-19 izao ny fanjakana ». « Hanampy sy hanohana anareo araka izao azo atao ny fanjakana », hoy izy.
Nampahafantarina ny fepetra efa noraisina, toy ny fampiatoana ny fandoavana ny ampaham-bola arotsaka mialoha ho an’ireo karazanketra alaina amin’ny tombombarotra. Mihemotra amin’ny 15 aogositra 2020 avokoa ny fandoavan-ketra sy ny hetra tambatra.
Tafiditra ao anatin’ilay drafitra marolafy hoentina manarina ny toekarena noho ny fahamehana ara-pahasalamana narafitry ny governemanta ireo fepera ireo. Amin’ny herinandro ambony indray no hihaona amin’ireo vondrona mpandraharaha madinika ny Filohan’ny Repoblika. Samy miandrandra vahaolana ao anatin’ny fifampitsinjovana ny rehetra ary efa voarain’ny Filoha ireo fangatahana teny Iavoloha, omaly.
Fisorohana valanaretina Hametraka paikady vaovao eto an-drenivohitra ny Tafika
Fiatrehana ny valanaretina Nanomana vola fiandry 1 000 miliara ariary ny fanjakana
Fanalefahan-tsazin’ny filoha Gadra telo arivo havoaka ny fonja manerana ny Nosy
Fanafihana fiara sy vono olona :: Ben’ny tanana voasambotra niaraka tamin’ny volabe
Fahatsiarovana :: Hizara ny fankalazana ny daty nahaterahan’i Dadah ny fianakaviany